रोजमेरी आवश्यक तेल लाभ र प्रयोगहरू
रोजमेरी साधारण फूलहरू भएको सानो झाडी हो जसले आश्चर्यजनक गन्ध दिन्छ। रूसीमा अनुवाद, "रोजमेरी" को अर्थ "समुद्री शीत" हो। हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यस झाडीलाई प्रेम र निष्ठा, समृद्धि र सफलताको प्रतीक मान्थे।
रोजमेरी आवश्यक तेलको गुणहरू
यसले उपयोगी पदार्थहरूको एक विशाल मात्रा समावेश गर्दछ, तेलले विभिन्न रोगहरूसँग मद्दत गर्दछ: रक्तस्राव, वैरिकाज शिरा, उच्च रक्तचाप, कमजोर रक्त वाहिका, नर्वस विकार, अनिद्रा, एक्ने, तेल छाला समस्या।
रोजमेरी आवश्यक तेलले श्रवण र गन्धमा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ, र शरीरबाट अत्यधिक ओस हटाएर उचित पानी सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
रोजमेरी आवश्यक तेलको प्रयोग
यस तेलमा एपिडर्मिस बाहिर निकाल्न पनि अद्वितीय क्षमता छ। त्यसकारण धेरै प्रसिद्ध लक्जरी कस्मेटोलोजी फर्महरूले आफ्ना उत्पादनहरूको आधारमा यसलाई प्रयोग गर्छन्।
छालामा फैलाउने दागहरूको उपचारमा यसले लाभकारी उपचार प्रभाव पार्छ। बदामको तेलको १ चम्चाको साथ रोजमेरी आवश्यक तेलका drops बूँदहरू मिक्स गर्नुहोस् र मिश्रण समस्या क्षेत्रमा प्रतिदिन रगनुहोस्। त्यहाँ स्ट्रेच मार्कको कुनै ट्रेस हुनेछैन।
आवश्यक तेल verbenon प्रकारको अनुहारको शुष्क र पातलो छालामा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसमा आधारित क्रीम, मास्क र लोशनले समस्या छालाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ, स्कारको उपचारमा मद्दत पुर्‍याउँछ र उमेरको ठाउँहरू हटाउँछ।
रोजमेरी तेल छाला कपालको विभाजन टु ends्गाहरूको लागि उत्तम उपचार हो। त्यस्ता तेलमा आधारित कुनै पनि कोषहरूले प्रारम्भिक टक्कुटपनको उपचारमा सबै सम्भव मद्दत पुर्‍याउँछ।
रोजमेरी आवश्यक तेलको साथ सबै प्रकारको नुहाउने ठाउँहरू निकै लोकप्रिय छन्, जसमा सामान्य उपचार गुणहरू छन्, र विशेष गरी मांसपेशिहरू र जोर्नीहरूमा दुखाइका लागि प्रभावकारी छन्।
बिभिन्न मसाज मिश्रणहरू उत्पादन गरिन्छ, जसमा केवल रोजमेरी तेल मात्र होईन, तर गुलाफशिप र खुबानी बेस तेल, आड़ू र कोको पनि समावेश हुन्छ।
यो तेलले पखेटाको उपचारलाई बढावा दिन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले एउटा विशेष कम्प्रेस तयार पार्नु पर्छ: of बूँदको तेल तातो पानीको भाँडामा हाल्नु पर्छ, त्यसपछि नरम कपडालाई त्यस्तै तरलमा भिजाउनु भनेको घाउमा चोटपटक लाग्नु पर्छ।
रोजमेरी तेल खेलकूद घाइतेहरूको लागि धेरै नै प्रभावकारी छ, साथ साथै कम्प्युटरमा दिनभर काम गर्ने मानिसहरूमा आँखा थकान भएमा।
यो तेलको अलिकता कडित छायाको साथ न्यानोपनले कुनै पनि जीवन परिस्थितिमा गम्भीर निर्णयहरू लिनु अघि ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यस्ता उपयोगी गुणहरू केवल सबै अवसरहरूको लागि एक सार्वभौमिक उपचार हो, जुन घरमा राख्नुपर्दछ र यसलाई ठीकसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
कपालका लागि रोजमेरी आवश्यक तेल
यस अद्भुत तेलको अर्को सकारात्मक गुण भनेको यसको कपाल र टाउकोमा फाइदाजनक प्रभावहरू हुन्। यसले डन्ड्रफलाई हटाउँदछ र रोक्दछ, कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ, कपाल झर्नु रोक्छ, र टाउकोको टोनसमेत टोन गर्दछ।
कपाल र टाउकोको मास्कहरूको लागि विभिन्न प्रकारका व्यंजनहरू छन्। यदि तपाईको कपाल कमजोर छ र बल र पोषण चाहिन्छ भने मास्क बनाउनुहोस्: १ ड्रप तुलसी, काली मिर्च, रोज्मेरी र २ ड्रप येलlang-यलlang्ग तेलको मिक्स गर्नुहोस्। मिश्रणमा नुनको एक थोरै मात्रा र २ बोक्रा थप्नुहोस्। K० मिनेट को लागी मास्क राख्नुहोस्। तपाईं यो मिश्रण शैम्पूको सट्टामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - यसले पनि सफा प्रभाव पार्दछ।
यदि तपाईं अझै आवश्यक तेल प्रयोग गर्न नयाँ हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं निम्नबाट सुरू गर्नुपर्दछ: कंघी गर्नु अघि, रोमेरी आवश्यक तेलको एक थोपा काठको कंघीमा राख्नुहोस्। यस्तो प्रकारको ब्रश गर्नाले तपाईको कपाल मात्र मजबूत हुँदैन, तर यसले मानसिक स्पष्टता र स्पष्टतालाई पनि बढावा दिन्छ।
र यदि तपाईं केवल सुन्दर कपाल मात्र चाहनुहुन्न, तर अभिव्यक्तिको रूप पनि चाहानुहुन्छ - एक बरौनी विकास उत्पाद प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको आँखा अति सुन्दर देखिनेछ!
कसरी कपाल को लागी जाल बनाउन को लागी?
रोजमेरी र contraindication को औषधीय गुणहरू
चमेली, आवश्यक तेल: गुणहरू, अनुप्रयोग, समीक्षा
रोजमेरी तेल: अनुप्रयोग, समीक्षा
मसलाकोटस आवश्यक तेल: गुणहरू र प्रयोगहरू
52 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,441 प्रश्नहरू।